FIREHETANA GOAVANA TENY AMBOHIPO :: Môtô an-jatony, fiara valo sy trano telo kilan'ny afon-dabozia • AoRaha
FIREHETANA GOAVANA TENY AMBOHIPO Môtô an-jatony, fiara valo sy trano telo kilan’ny afon-dabozia
Lelan’afo niredareda, setroka mainty, tabataba, ireo no hita sy re teny Ambohipo, ny alin’ny alahady lasa teo. Nitrangana firehetana goavana teny an-toerana. Nandravarava ny afo.
Kila forehitra tamin’ izany ny môtô miisa roa amby zato sy fiara dimy ary tranohazo iray. Fiara telo hafa sy trano biriky roa may voakasiky ny afo. Tsy nisy aina nafoy sy olona naratra tamin’ity tranga mahatsiravina ity.
Tsy mitazam-potsiny ny mpitandro filaminana fa manao ny fanadihadiana hahafantarana ny marina. Ny pôlisy avy etsy amin’ny Borigady misahana ny heloka bevava (Bc) etsy Anosy no misahana ny famotorana. Olona maromaro toy ny mpiambina io toerana io no nanontaniana ny tena zava-nisy marina.
Teo amin’ny kianja filalaovana basket-ball sady toerana natokana hijanonan’ny fiara na «parking» amin’ny alina no nitrangan’ny firehetana. Tamin’ny 12 ora tany ho any no naharay antso ny mpamonjy voina, ka nandefa fiara sy olona mpamono afo teny an-toerana. Efa niezaka namono sy namehy ny afo ihany ny olona saingy tsy tana izany fa nalaky niitatra. Efa afo niredareda no novantanin’ny mpamonjy voina.
Tao amina tranohazo iray no voalaza fa nipoiran’ny afo voalohany. «Tapaka ny jiro, tamin’io alina io. Nampirehitra labozia ny olona tao amin’ny tranohazo iray tsy lavitra teo. Ny afon-dabozia, avy eo, no nikasika tamina môtô iray teo akaiky teo. Nipoaka io kodiaran-droa io. Vetivety dia niitatra ny afo», hoy ny avy amin’ny mpamonjy voina.
Mifanakaiky sy mifaneritery ireo kodiaran-droa sy fiara nijanona teo amin’io «parking» io. Teo ihany koa ny fisian’ny solika sy fitaovana mora mirehitra teo amin’izy ireo. Nalaky, noho izany, ny fiitaran’ny afo.
Saika mipetraka eny Ambohipo ny tompon’ ireo fiara sy kodiaran-droa kila ireo. Tonga teny an-toerana avokoa izy ireo, tamin’io alina io sy ny ampitso.
ADY AMIN’NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA :: Nahazo fitaovana mitentina 31 miliara ariary ny Zandary